वायुसेवा निगम बेच्नुको विकल्प छैन • Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : 11th December 2018
निगमवाट सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाईराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाईराख्ने र उनीहरूको दोषको भागेदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन ।
काण्डै काण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फष्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाईखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके भ्रष्ट वनाउने, नसके वदनाम गराउने र त्यतिपनि नसके असक्षम वनाउने थलो भएको छ । अर्काे काण्ड पर्खने गरी निगम पालिरहनु आवस्यक छैन, वेचौं ।
सन् १७७५ मा पेट्रिक हेनरीले दिएको एउटा चर्चित भाषण छ, ‘गिभ मि लिवर्टी अर गिभ मि डेथ’ । भाषणको सन्दर्भ अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम थियो । त्यसैले सवै विषय यस लेख संग प्रासांगिक नहुन सक्छ तर मुख्य दुई प्रश्न जो उनले आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ति भने यहाँ पनि सान्दर्भिक छन् । पहिलो कुरा त उनि के भन्छन् भने ‘आशाहरूको भ्रममा झुण्डिनु मानव स्वभावै हो भन्दैमा कुनै पिडादायी सत्यवाट आँखा चिम्लनु र उक्त विषयले पूर्णरुपमा हामीलाई पशु मै परिणत गरिहाल्दा सम्म पनि मस्त संग पर्खनु के उचित हो र ? के त्यो कुनै विवेकी मान्छेले गर्ने व्यवहार हो र ?’ दोस्रो कुरा उनि के भन्छन भने ‘कुनै कुराले हामिलाई पशु मै परिणत गरिदिनु अघी त्यस कुरालाई नै वदल्न किन नलाग्ने ?’
नेपालमा कतिपय विषयहरू यस्तै छन् जसले हामीलाई पशुमा परिणत गर्दैलगिरहेको छ । तर हामी भने त्यसलाई वदल्नु भन्दा त्यसको मिठो आवाजको धुनमा लट्ठ छौं । ति विषयहरू मध्य यहाँ उल्लेख गर्न लागिएको विषय हो नेपाल वायुसेवा निगम (शाही) । जसले एक पछि अर्काे गर्दै हाम्रो सवै नेताहरूलाई लोभी, भ्रष्टाचारी र कर्महीन मान्छेमा परिणत गरिदिदैछ । यसका कति भएका र कति नभएका काण्डहरूले एक पछि अर्काे गर्दै हरेक प्रधानमन्त्रीहरू, पर्यटन मन्त्रीहरू, निगमका व्यवस्थापहरू र कर्मचारीहरूलाई पशुमा परिणत गरिदिंदैछ । तर उनिहरू भने साईरनको धुनमा मस्त छन् ।
मैले तत्कालिन शाही नेपाल वायुसेवा निगम (आएनएसी) वारे सुनेको पहिलो भ्रष्टाचार काण्ड एभ्रो काण्ड हो । त्यो पञ्चायत कै वेला थियो । जनता तहमा अहिले जस्तो आवाज उठ्ने वेला नभए पनि पञ्चायत भित्रको आन्तरिक गुटवन्दीमा भने उक्त काण्डले ठुलै खैलावैला मच्चाएको थियो ।
जनआन्दोलन २०४६ पछि अर्काे काण्ड सुनियो धमिजा काण्ड । युरोपमा टिकट वेच्ने एजेण्ट नियुक्त गर्दा कमिसन खाएको भनिएको यो काण्ड अहिले आएर सम्झदा शानेवानिको अवस्था विश्लेषण गर्न सहयोगी वन्छ । शानेवानि यस्तो कम्पनि थियो जसको युरोपको आकासका लागि सेल्स एजेण्ट वन्न हानाथाप थियो र करोडौं त कमिसन नै दिईन्थ्यो । एजेण्टले कति कमाउथ्यो होला र निगमको व्यापार कति थियो होला ? त्यो पनि आज भन्दा झण्डै ३० वर्ष अघि ।
मैले सुनेको अर्काे काण्ड हो भएका विमान वेच्ने काण्ड । चालु हालतमा रहेका निगमका दुई वोईङ पुराना भनेर वेचियो । भरखरै पञ्चायत ढलेको र वहुदल आएको वेला थियो । नयाँ नेतृत्व थियो । शानेवानि नेतृत्वले नेताहरूलाई फकाएको र फसाएको भनियो । जनतामा पनि पुरानो वेचेर नयाँ ल्याउने होला त भन्ने पर्यो धेरै विरोध भएन । रमाइलो त के भने यता युरोपमा टिकट वेच्नेवाट कमिसन, अनि उता युरोप उड्ने विमान नै वेचेर कमिसन । अनि आफ्ना भएका विमान वेचेर नयाँ विमान नल्याए पछि विदेशी विमान कम्पनीहरूवाट पाइने भिन्दै कमिसन । कमिसन लिने दिनेहरूको आन्तरिक संजाल मै अविश्वासको स्थिति पैदा गरेको यस काण्ड पछि शानेवानि जतिपनि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको निर्णय गर्छ एउटा न एउटा विवाद आउछ । एकताकाका वलिउडमा अजित, राजामुराद, म्याक मोहनहरूले खेल्ने फिल्महरूमा भिलेन भिलेन कै विच अविश्वासको खाडल वढ्दै गएर अनेकौं भएका नभएका काण्डहरू वाहिर आउने गरेको देखाइन्थ्यो । उक्त काण्ड पछि एजेण्ट एजेण्टहरू एक आपसको रंजिस साँध्न हल्ला मच्चाउन थाले । उक्त नकारात्मक काण्डको सकारात्मक पाटो के भईदियो भने निगमका काण्डहरू गोप्य रहेनन् । मुलुक र जनताको हितका लागि भन्दा आपसी टक्करमा विषय वाहिर आउने गरे पनि जनताले विषय थाहापाउने भए । शानेवानि नेतृत्व र राजनितिक नेतृत्व खास गरेर प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीहरूका नामहरू एक पछि अर्काे कुनै न कुनै काण्ड जोडिएर वाहिर आउन थाले ।
मैले सुनेको अर्काे काण्ड थियो लाउडा । आफ्ना विमान वेचेर भाडाका विमान चलाउने निर्णयमा पुगेको शानेवानि नेतृत्वले लाउडा कम्पनी संग विमान भाडामा ल्यायो । विपक्षि दलहरूको देशव्यापि संयुक्त आन्दोलन र प्रमुख विपक्षिदलको संसद अवरुद्ध अन्दोलन खेपेको यस काण्डले जनस्तरमा नै शानेवानि, सरकार, प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्री भनेका भ्रष्टाचारी हुन भन्ने पारिदियो र त्यसपछिका कुनै पनि सरकार, प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्री वा शानेवानि नेतृत्व विवादको अपवाद रहेनन् । अव या त साँच्चैको कमिसन नमिलेर काम हुन छोड्यो या वदनाम हुने डरले निर्णय नै हुन छोड्यो या निर्णय नगरि पनि कमिसन आउने वाटा त छदै थिए, निजि तथा विदेशी विमान चालक कम्पनीहरू ।
चाल्र्स सोभराज भन्थे रे नेपालमा ‘जे पनि’ गर्न सकिन्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम निगमको अर्काे काण्डले गर्यो । मैले सुनेको त्यस्तो काण्ड हो, चेज एयर काण्ड । हुदै नभएको कम्पनिवाट जहाज ल्याउने भनि त्यस्तो कम्पनीको एजेण्ट हुँ भन्नेलाई वैना दिईएको अनौठो काण्ड थियो त्यो । कम्पनी छ कि छैन, एजेण्ट हो कि हैन, कम्पनी छ भने त्यो विमान वेच्न वा भाडामा दिन सक्ने वा दिइरहेको हो कि हैन, एजेण्ट हो भने त्यसले विमान नै उपलव्ध गराउने क्षमता राख्छ राख्दैन जस्ता सामान्य एप्राइजल नै नगरि काम हुँदो रहेछ, नेपालीलाई उल्लु वनाउन कुनै चाल्र्स सोभराज चाँहिदैन रहेछ र कुनै धुर्तले वटुवा झुक्याय जस्तै हामीलाई जसले पनि झुक्याउन सक्ने रहेछ भन्ने देखिन थाल्यो । यसले मुलुक भित्र नेतृत्वको क्षमता प्रति अविश्वास मात्र पैदा गरेन हाम्रो वुद्धुपनाको अन्तरराष्ट्रियकरण समेत गर्यो । मुद्दा जितेर वैना फिर्ता लिइएको भए पनि उक्त काण्डले भने निगम र नेपालीहरूको नियत मात्र होईन निर्णय प्रक्रिया, खरिद प्रक्रिया, सुचना जानकारी र क्षमता समेत छताछुल्ल वनाईदियो ।
मैले सुनेका काण्डहरूको लिष्टमा अर्काे नाम हो चाईना साउथ वेष्ट काण्ड । यो काण्ड विमान लिजमा दिन प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरू मध्य पारदर्शी ढंगले छनौट नगरिएको र लिज रकम घटवढ गरी कमिसन लिए दिएको काण्ड थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य मुद्दा रहेको र सत्तारुढ दल भित्रै व्यापक झगडा पैदा गरेको उक्त काण्ड पछि लामो समय निगम काम नगरी खाने ठाउँ वन्दै गयो । जमिनको भाडा, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ जस्ता स्रोतवाट कर्मचारी पाल्ने काम सुरुभयो । डोमेष्टीक उडानहरू कटौती हुँदै गए । कुनै वेला नेपाली आकासको एकछत्र वादशाहको अवनती गियर अप भयो, जारि छ । त्यतिवेला सम्म पर्यटन मन्त्रालय विवादको अखाडा भईसकेको थियो र त्यो मन्त्रालय नै छानेर जाने मन्त्री माथि संका सुरु भैहाल्थ्यो । आफै मन्त्रालय छानेर नगएको मन्त्री हो भने उस्का लागि उक्त मन्त्रालय तातो तावा वनिसकको थियो जो अहिले सम्म कायम छ । कुनै पर्यटन मन्त्री अहिले सम्म पनि निर्विवाद रहेको छैन ।
जनआन्दोलन ६२/६३ पछि शानेवानि वाट नेवानि वनेको निगम, सम्विधानसभाको पहिलो निर्वाचन पछि जहाज कम्पनीमा पनि वोइङबाट एयरवसमा सर्न थालेको हो कि झै देखिने गरि फेरी अगाडी आयो । तर त्यो कर्कलाको पानि धेरै दिन टिकेन । अपुग कानूनी प्रक्रिया र कमिसनको चर्चाले तत्कालिन निगम नेतृत्व जेल मात्र गएन वरु क्रान्तिको राप र तापवाट आएको नयाँ राजनितिक नेतृत्व पनि उस्तै रहेछ भन्ने निराशा जनतामा पर्न गयो । एयरवसले लिएको वैना फिर्ता दिएपछि मात्र रफादफा भएको उक्त काण्ड मैले सुनेको अर्काे काण्ड हो ।
अहिले चर्चामा रहेको वाईडवडी काण्ड त्यसै सृङ्खलाको अर्काे काण्ड हो । हुनत नेवानि नेतृत्व यसलाई अहिले सम्म कै सवैभन्दा सरल र सहज घटना हो भन्छ तर छफलफ गर्दा एउटा सरकार, एउटा पर्यटन मन्त्रि, खरिद गर्दा अर्कै सरकार, अर्कै पर्यटन मन्त्री र जहाज ल्याईपुर्याउदा अर्कै सरकार, अर्कै पर्यटन मन्त्री भैदिदा यो काण्ड अहिले सम्मका सवै काण्ड भन्दा वढी जटिल वनेकोछ । यो मुद्दा ‘हो हो’ र ‘हैन हैन’ मा पिंङ खेलिरहेको छ । कोहि अदालत पनि जाँदैन, कुनै आयोग पनि वन्दैन । आधिकारिक निकायले प्रश्न गर्दैन तर तिनै निकायमा रहेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक भाषण गरिहिड्छन् । निगम नेतृत्व सार्वजनिक संजालमा स्पष्टिकरण र दोहरीमा व्यस्त छ । पर्यटन मन्त्रीलाई प्रष्टिकरणको भ्याइनभ्याई छ । अखवारहरूले मुद्दा पाएका छन्, तर कुनै व्यावसायिक त के स्वयंसेवक वकिलले समेत काम पाएको छैन ।
यी त भए चर्चित, ठुला र अन्तरराष्ट्रिय उडानका काण्ड । डोमेष्टिकमा, दिनकादिन, प्रत्यक सिटि अफिसमा, प्रत्यक एयरपोर्टमा दोहरिने काण्डको कुरा भिन्दैछ । टिकट काट्न जानुस् छैन भन्ने, विन्तिभाउ, सोर्सफोर्स गरेर टिकट लियो जहाज डिले हुन्छ । कथं जहाज आयो भने पनि कहिले मुसा पस्यो भन्छ कहिले चिल ठोकियो भन्छ । निगमलाई मात्र चिन्ने चील र मुसा छन् दुनियाँमा । जेनतेन जहाज उड्ने भो भनेर जहाजमा पस्यो कैयौं सिट खालि छ । अनि टिकट छैन किन भन्या ? मनमनै भुतभुाउने वाहेक के उपाए छ ? मुस्किलले जहाज उड्यो सिट देखि छाना सम्म थर्किन थाल्छ, थरररर । उता प्यासेन्जरको मुटु पनि थरररर । जमाना कहाँवाट कहाँ पुगिसक्यो सारा प्राईभेट एयरलाईन्सको टिकेट अनलाईन छ, प्रतिस्प्रधामा छ, एजेण्टकोमा जानुस प्राइभेटको टिकट खुरुक्क पाईन्छ, निगमको माग्नुस सिटि अफिस जानुपर्छ रे । निगमले ई–टिकटको एउटा वेवसाईट समेत वनाउदैन । कुन सेक्टरको टिकटको मोल आज कति छ भनेर जान्न मात्र पनि सिटि अफिस धाउनु पर्छ । प्यासेन्जर किन चढ्छ उस्को प्लेन ?
काण्डै काण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फष्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाईखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके भ्रष्ट वनाउने, नसके वदनाम गराउने र त्यतिपनि नसके असक्षम वनाउने थलो भएको छ । फेरी एकपटक पेट्रिक हेनरी कै शव्दहरू सापटी लिन चाहन्छु, अव आशाको भ्रममा झुण्डिन छोडौं । यो पिडादायी सत्यवाट आँखा चिम्लेर र यस विषयले पूर्णरुपमा हामीलाई पशु मै परिणत गरिहाल्दा सम्म मस्त संग पर्खनु उचित छैन । त्यो कुनै विवेकी मान्छेले गर्ने व्यवहार होइन । त्यसले हामिलाई पशु मै परिणत गरिदिनु अघी त्यसलाई नै वदल्न लागौं । वदल्ने कुरा कुनै खोल र मोल वदल्ने होईन सम्पुर्ण रुपमा वदल्ने, ए कम्प्लिट ट्रान्सफरमेसन । निगमवाट सरकारी कम्पनी वनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाईराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाईराख्ने र उनिहरूको दोषको भागेदार राजनीतिक नेतृत्वले भैराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केहि होइन ।
निगम होस् की कम्पनी, आफुले लगानी गर्न नपर्ने, लगानि उठाउनु पनि नपर्ने, ऋणमा पनि नपर्ने र वरु सके भसक्कै कमाउन पाउने संचालकहरू जम्मा गरेर र काम नभए मज्जाले वसिवसि तलव आउछ भन्ने वुझाई भएका कर्मचारी पालेर समृद्धिको सपना फगत एउटा गफ मात्र हो । यसलाई वन्द गर्ने वाहेक अर्काे असल निर्णय छैन, हुन सक्दैन । वर्तमान सरकारले यो काम गर्ने आँट गरोस् । पारदर्शिता कायम गर्न एउटा स्वतन्त्र कमिटी वनाउने, खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट क्रेता छान्ने र विक्रि गर्ने नै उपयुक्त वाटो हो । अहिलेको विश्वमा राज्यले व्यापारवाट विस्तारै हात झिक्न जरुरी छ । कर्णाली र मुस्ताङ देखाएर सेतोहात्ती पाल्नु भन्दा कर्णली र मुस्ताङका जनताको पनि निजि क्षेत्रका विमान मज्जाले चढ्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने र निजी क्षेत्रको नियमनमा गम्भिर ध्यान दिने हो भने अर्काे काण्ड पर्खने गरी निगम पालिरहनु आवस्यक छैन, वेचौं ।